Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo furmay iyo Ajandayaasha miiska saran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirkan waxaa isha ku haya Beesha Caalamka iyadoo sidoo kale dalbatay in si daahfuran looga doodo arrimaha caqabadaha ku ah hergelinta heshiiska doorashada ee 2021 lagu gaaray Afisiyooni.
Waxaa dhanka kale jira xogo aan helnay oo sheegaya in Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Farmaajo uu dalbaday inuu ka qeyb galo shirka waxaase u diiday Ra’isul Wasaare Rooble iyadoo loo sheegay in ka qeyb galkiisa uu abuuri karo xasarado siyaasadeed.
Qodobo xasaasi ah ayaa maanta laga doodi doonaa iyadoona aan idiin soo gudbin doono sida ugu dhaqsiyaha badan waxa laga hadlo.
Haamo Badda ay soo tuftay oo lagu arkay Xeebta Cadalle iyo Hirshabelle oo ka hadashay